दृष्टिकोण – Page 78 – erupse.com
सुनसान सरकार !
मङ्लबार, कार्तिक २, २०७३ मा प्रकाशित
कृष्णप्रसाद शर्मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसरी पनि फाल्नु पर्ने आन्तरीक र बाह्य दबाब बीच भनेको प्रचण्ड सरकार अहिले मसानघाट जस्तै सुनसान छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भएभरको शक्ति खर्च गरेका शेरबहादुर अहिले कहाँ छन् थाहा छैन । काँग्रेस आँफै सरकारमा छ तर काँग्रेसबाट गएका गगन थापा बाहेक अरू..
लिङ्गका आधारमा गरिने गर्भपतन अपराध हो
डा. लक्ष्मी आचार्य गौतम बिन्जु खड्का गर्भअवस्था भनेको प्रकृतिको जटिल प्रक्रिया हो । गर्भपतन भनेको कुनैपनि महिलाले गर्भ रोकिएको पत्ता लागेपछि कुनै कारण अप्राकृतिक तरिकाले गर्भ तुहाउनु हो । र, १२ हप्तासम्मको गर्भलाई महिलाले सो इच्छाले गर्भपतन गराउन र विशेष कारणले १८ हप्तासम्म पनि गर्भपतन गराउन..
फाटेको मन के–ले सिउने ?
राजेशचन्द्र रा.भ. पोहोर साल खुशि फाट्यो जतन गरि मनले टाले त्यही साल माया फाट्यो जतन गरि मनले टाले यसपाली त मनै फाट्यो केले सिउने ? केले टाल्ने हो ? गायिका अरूणा लामाले गाएको नेपाली आधुनिक गितले भुकम्प पिडितको पिडालाई छोएको छ । हो यो गितले पक्कै पनि भुकम्प पिडितको पीडालाई कम होइन झन् पीडा थप्ने काम भने..
यो दशैंमा जे देखें !
आइतवार, अशोज ३०, २०७३ मा प्रकाशित
तीते करेली कृष्णराज शर्मा दशैंहरू सबै उत्तिकै उमँगका छन् । उत्तिकै रमाईला छन् । यसपाली देखेको र भोगेको यो ऋतुको यो दशैंमा पनि त्यत्तिकै रमाईलो र उमँग छ, फेरीपनि फरक छ । फरक त उमेर र समयले पार्ने रहेछ । फरक उमेर र समयको होईछ । उमेरले दशैं मनाए जस्तो मैले मनाएर रमाईलो नहुने रहेछ । मेरा नशा नशामा दौडने..
भारत: कस्तो छिमेकी ?
ध्रुवबहादुर प्रधान दक्षिण एसियामा यतिखेर द्वन्द्व चुलिँदै गएको अवस्था छ । भारतले कश्मीर समस्याको जगमा यो द्वन्द्वलाई नयाँ मोडमा पुर्‌याएको छ, पाक सीमा क्षेत्रमा 'सर्जिकल स्ट्राइक' नामक कारबाही गर्दै । कश्मीर समस्याको कारण भारत र पाकिस्तानले अहिलेसम्म तीनपटक युद्ध गरिसकेका छन् । दुवै मुलुक यो..
सन्दर्भ दशैको टीका : पत्रकार भानुभक्तले लेखे प्रचण्डलाई पत्र
बुधबार, अशोज २६, २०७३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २६ असोज- नेपालीहरुले मान्दै आएको बडादशैंको टीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहिस्कार गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको आलोचना भएको छ । अमेरिकी राजदूतले दशैको टीका लगाएको र मुस्लिम धर्म मान्ने राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिनले दशैंको टीका लगाएको तस्बिर र उदाहरण..
तारा घर्ती ‘अन्जली’ को स्मृति…२० वर्षमै बन्दुक पड्काउँदा
तारा घर्ती ‘अन्जली’ माओवादी जनयुद्धको सुरुवातकी अगुवा कार्यकर्ता हुन् । उक्त आन्दोलनमा पहिलोपटक बन्दुक पड्काएका तीनजनामध्ये एक घर्ती त्यसपछिका अनेकन् युद्धमोर्चामा सहभागी पनि भइन् । हाल माओवादी केन्द्रकी नेता रहेकी घर्तीले पहिलोपटक बन्दुक पड्काएदेखि जनयुद्धका विभिन्न कालखण्डका स्मृति यसरी..
दसैंले सबैलाई जोडेको छ -संस्कृतिविद् जोशी
फूलपातीको बिहान । पाटन दरबार स्क्वायर छेउको पुरानो घर । ९६ वर्षीय संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी घर अघिल्तिरको सानो बगैंचामा थिए । आराम गर्दै हैन, धमाधम काम गर्दै । गाउँ–सहरलाई दसैंको रौनकले छोप्दैगर्दा यी शताब्दी पुरुष भने फलामे कैंचीले बगैंचाका स–साना रूखका हाँगा काटेर मिलाउँदै थिए । एकैछिनअघि एक..
नीरस जीवनमा रस भर्ने को होला ?
कृष्णराज शर्मा जीवन र जगतका बारेमा धुरन्धर विद्वानहरूले प्रवचन गरेको सबैले सुनेका छौं । बिषद ब्याख्या गर्छन् उनीहरूले । यो जीवन र जगतको सम्बन्धको ब्याख्या स्वर्गलोक र ईन्द्रलोकमा उती जरूरी छैन । छ त, इहलोकमा छ । अन्यत्र बढी खोजी अनुसन्धानको जरूरी पनि छैन । यही लोकमा जीवनको प्रयोजन र प्रयोग हुन्छ ।..
दशैं पर्वको धार्मिक, सामाजिक र आध्यात्मिक महत्व
कमल रिजाल बडा दशैं नेपाली मात्रकै महान् चाड हो । हरेक वर्ष शरद ऋतुमा पर्ने यस पर्वलाई देश–विदेश जहाँसुकै रहेबसेका भए पनि सारा नेपालीहरूले रमाइलोसित मनाउने गर्दछन् । विशेषगरी आश्विनशुक्ल प्रतिपदाको दिन घटस्थापना गरी जमरा राखेर मनाउन शुरू गरिने यो पर्व दशमीको दिन विसर्जन गरी मान्यजनहरूको हातबाट..